Gabdho Soomaaliyeed oo u dhoofay in ay ka qabgalaan dagaalka Suuriya | Somaliska
Ugu yaraan 6 gabdhood oo dhalinyaro ah ayaa bisha May dhaxdeeda waxa ay ka dhoofeen waddanka Sweden si ay u caawiyaan ama ugu qaybqaataan dagaallada jabhadaha muslimiinta ah ay ka wadaan waddanka Suuriya, sidaa waxaa yiri Gudoomiyaha ururka islaamiga ee Järva mudane Ibraahim Buraale.
Ibraahim ayaa muujiyey in ay cabsi badan jirto. Waallidiinta caruurta ka maqanyihiin ayaa ah kuwo aad u xishoonaya oo ka baqaya in ay caawimo waydiistaan, arrinku ma ́aha mid hagaagsan waa in aynu caawino waydiisanaa, islmarkaana kahor tagnaa dhibaatada, sidaa waxaa yiri Gudoomiye Ibraahim.
Ugu yaraan 75 qof oo badidoodu yihiin rag ayaa waxay u dhoofeen dalka Suuriya si ay u caawiyaan ururka Al-qaacida. Bilowgii bishii may ayaa waxaa xaafada Rinkeby ka dhoofay 3 wallaalo ah 2 gabdhood iyo wiil. Labo todobaad kadibna waxaa dhoofay 4 gabdhood oo kale, 1 waxay deganayd xaafada Husby, midna Kista iyo Rinkeby iyo Hässelby.
Wararka waxaa la isla dhaxmaraya in gabdhaha ay u dhoofeen in ay guursdaan nimanka dagaalka wada, halka qaar kale ay sheegayaan gabdhuhu waxay caawinayaan jabhada dagaalka iyo kuwo kale oo leh gabdhaha waxay halkaa u tageen in ay ka qaybqaataan oo dagaalamaan dagaalka waddanka Suuriya ka jira.
Um amiira says:
Howl la.ana kabadatey suuriyanka ayagaba wadankoda kasoo cararooyo maxee jihaadayan waalidka oka duceysata janno lagu helaa mahe walidki wuxu raali ka ahen murug iyo walwal aygeliyen jana saas lagu helaa miyaa waxa kaheshina ledihin
Waa wax aad loo filayey loona filan doono, inta masaajida iyo gooabaha kale ee aan udiin iyo kharba doonano ay hor boodayaan dhalinyarada iyo waayeelka salka-fudud ee u jidbaysan afkaarta dagaal-doonka ah ee Salafiga ama Wahaabiga loo yaqaan. Waalidiinta ilmahooda dagaalada kala soo cararay waa in ay ka gaashaantaan in aan geed aysan filayn loogu soo gamban goobaha umada ka dhexeeyana waan in isla-xisaantan iyo wax qarin la’aani ka jirto oo aan sheekadu noqo, sidaba ay hada tahay oo ah masaajidkaaba qayladu ka soo yeertay.
kan labaxay jaamac miicaad reer gaalo maxaa kuu galay waa adinga durbaba weeraray masaajidadee
Walaale masaajid ma weerarin mana weerari doono ee ha fududaan. Kaliyah afkaarta guracan oo aan Isaamka suuban raadka ku lahayn oo caamada iyo marasta diinta looga dhigayo baan sheegay, sheegina doonaa in ay haboontahay in hoos loo eego. Fakarkaan qabo waad dhaliili kartaa laakiin waxaad ku dhaliishay itus oo itaabsiih, hadii kale fadhi ku dirir xifmad maahan ee ogoow. Fadlan fakar kaaga adigaa leh kaygana anniga leh, xad gudubna reeban.
waan ka naxay wlh dhalin yarada iyo dhibka walindka ku dhacay , somalay carabtani iinay ina qadaan dhalinta ,lasocda dhalin yarada cida ay saxib latahay inaay laso coon carabta wayo daad asaalka somali neceb oo daad xasaad badaan leh , waxana wanagsaan dowlada sweden inay dhalinta kaa yaar laga so celiyo madaarka laga dhofo hadi ayna walidki dhalay ayna wadiin
Dal laawe/ dad laawe says:
Waxaan ahay qof qabiilku aad uGu wayn yahay
………………………..isla qab wayn
……………………….isla qurux badan
………………………qalbiga taajir ka aha
………………………qalad aan samayn
………………………aqoon wanaagsan leh
………………………waddankayga waa qabri
Kuma ayaan ahay?